नारायणकाजीको रिस : एउटालाई हाँसो, अर्कोलाई गलपासो ! « Ok Janata Newsportal
नारायणकाजीको रिस : एउटालाई हाँसो, अर्कोलाई गलपासो !
काठमाडौं । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)को बृहत्त जनप्रदर्शनमा फरक दृष्य देखियो । विरोधसभाको सभापतित्व गरेका नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ झर्किए । उनी कार्यक्रम अवधिभर असन्तुष्ट देखिए । श्रेष्ठको मुहारमा कान्ती छाएन ।
श्रेष्ठ नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)को संघर्ष समिति संयोजक पनि हुन् । आखिर किन श्रेष्ठ कार्यक्रमस्थलमै यति धेरै असन्तुष्ट बने ? यसको कुनै राजनीतिक कारण नभई कार्यक्रमको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय थियो ।
सभा सुरु हुनुअघि जुलुसलाई टुँडिखेल घुमाउने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, भिड ठूलो भएको र कार्यक्रमस्थल भरिइसकेको भन्दै नेताहरुले सो योजना स्थगित गरे । नारायणकाजी भने शहिदगेट पुगिसकेका थिए । उनले टुँडिखेल परिक्रमा गर्नुपर्ने अडान लिए पनि अरुले मानेनन् र उनी कार्यक्रमस्थल फर्किए ।
आन्दोलनको कमाण्डरसमेत रहेका नारायणकाजीले आफूले भने बमोजिम नभएपछि अपमानबोध गरेका हुन् । उनको असन्तुष्टिको कारण यति नै हो । प्रचण्डलगायतका नेताले मान्छेहरु खचाखच भइसकेकाले जुलुस घुमाउँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै टुँडिखेल घुमाउन नमानेपछि उनी आन्दोलन परिचालन कमिटीलाई बाइपास गरिएको भन्दै झोक्किएको स्रोतले जनाएको छ ।
नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसबारेमा केही बोलेका छैनन् ।